I-Semalt ichaza i-WordPress Plugins Okufunekayo ukuze uthumele iiWebhusayithi yakho
I-plugin kwiWindowsPress isofthiwe equkethe imisebenzi emininzi esetyenziselwa ukukhulisa iwebhusayithi ye-WordPress. Iiplogram ze-Wordpress zingafaka iinkcukacha ezintsha okanye zandisa ukusebenza kwiwebhusayithi. Bangakwazi ukulungelelanisa kwiintlobo ezahlukeneyo zeWebhsPress ezifana nebhulogi, indawo yesayithi okanye iwebhusayithi yeWoo Commerce. Nangona kunjalo, akuzona zonke iiplagi ezixhamlayo kwaye zifanelekile ukufaka kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress.
URyan Johnson, ingcali ehamba phambili ye-12 (Semalt , uchaza apha ezinye zeeplagi eziyimfuneko ukuba uziqwalasele.
1 - samsung corporation contact. IWP Rocket
I-plugin ye-WordPress ye-caching engasetyenzwa ngokucwangciswa okuncinci. Iqalisa ekusebenziseni ukwenza ukuba iwebhusayithi yakho ilayishe ngokukhawuleza ngokukhawuleza. Ukukhawuleza ukulayisha iiwebhsayithi kukutsala i-traffic kwi-site yakho Izixhobo ze-WP Rocket ziquka ukusetyelwa ngokukhawuleza, umgcini-mkhangeli kunye ne-caching page, i-setemap yokupakisha phambili, ukulungelelaniswa kwedatha, ukuhambelana kwezinto ezininzi, ukuhambelana kwe-CloudFlare, ukuhambelana kweelwimi ezininzi, ukudibanisa ngeelwimi ezininzi, ukuxhaswa kweelwimi kunye no-E-commerce..
Le plugin ye-WordPress ikunceda ukuba wenze ifomu efanelekileyo eyamemayo, ngoko uncede abantu baqhagamshelane nawe ngaphandle kwe-imeyile yakho. Umakhi wokudonsa nokwehla. Ngoko ke, udonsa uze uphonsa umsebenzi owufunayo, mhlawumbi imenyu ehlayo, kwifom. Iikhomplathi zefom zangaphambili ezakhelwe nazo ziyafumaneka. Iimpawu zeWPForm ziquka ukudibanisa nokwakha umgangatho wendlela yokwakha, udidi lweempawu eziphathekayo, iifomati, iifayili zentsuku, ukulawulwa kokungena, ukukhuselwa kogaxekile, idatha ye-geolocation kunye ne-Add-ons ezifana ne-Addpal Add-on, i-Add-on, i-Papier Add-on, isayinwe Ukongezwa phakathi kwabanye.
I-WPBakery ngumakhi wekhasi ogqwesileyo odibanisa nokuxhasa ezinye iiplagi ze-WordPress. Ngeli-plugin ye-WordPress, unokukhawuleza ukwakha nayiphi na indawo oyifunayo kwiwebhusayithi yakho ngoncedo lokudonsa nokwakha umakhi. Iyahambelana neWowmerce kwaye i-SEO friendly ngoko-ke inokusetyenziswa kwiindawo ezininzi. Iimpawu zalo zikhowudi ezijoliswe kumntu, iilwimi ezininzi ezilungeleyo, phambili kunye ne-backend umhleli, inkxaso yendlela yokugcina ifayile, izihlungi zesithombe phakathi kwabanye.